Macalin Dugsi Oo Maanta Muqdisho ku kufsaday Gabar 7 Jir ah | Somalia News
Macalin Dugsi Oo Maanta Muqdisho ku kufsaday Gabar 7 Jir ah
Dhacdo xanuun badan ayey aheyd markii maanta Duhurnimadii laga war helay warkaan.
Macalin dugsi quraan ayaa sida la sheegay maanta gabar dhiganeysay dugsigiisa xilligii qadada ku reebtay dugsiga isaga oo u geysaytay fal kufsi ah.
Gabadha da’deedu sida lagu sheegay waa 7 jir.
Dhacdadan meesha ay ka dhacday waa xaafada jamhuuriyo oo ka tirsan degmada kaaraan ee gobolka Banaadir.
Dad ka carooday falkaasi ayaa isku dayey inay dilaan macalinka balse markii dambe waxaa loo kaxeeyey Xarunta Dembi baarista CID-da.
Previous articleDeg Deg: Lakulanka RW Rooble oo lacag laga dhigay, Xiisadda Dagaal ee Somaliya iyo Kenya oo..
Next articleLabo diyaaradood oo isku dhacay xilli ay hawada ku jireen